UHezekile 38 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
2 Nyana womntu, bubhekise ubusoubuso bakho kuGogi wasezweni lakwaMagogi, isikhulu sakwaRoshe noMesheki noTubhali, uprofete ngaye.
3 Yithi, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, YabonaYabona, ndikuchasile, Gogi, sikhulu sakwaRoshe noMesheki noTubhali.
4 Ndiya kukuphambanisa, ndikufake amakhonkco emihlathini, ndikurhole nempi yakho yonke, amahasheamahashe nabamahashe, abaxhobe baphelelisela bonke bephela, ibandlaibandla elikhulu, benamakhaka neengweletshetshe, bephethe amakreleamakrele bonke bephela:
6 uGomereuGomere namahlelo akhe onke, nendlu kaTogarma ezingontsini zasentla, inamahlelo akhe onke; izizwe ezininziezininzi zinawe.
8 Emva kwemihla emininzi uya kuvelelwa; ekupheleni kweminyaka leyo uya kufika elizweni elibuyisiweyo ekreleni, libuthiwe ezizweni ezininziezininzi; ufike ezintabeni zakwaSirayeli ezahlala zibharhile. Lona likhutshwe ezizweni, baza bahlalabahlala bekholosile bonke bephela.
9 Uya kunyuka uze njengesiphango, njengelifu ukulisibekela ilizweilizwe, wena namahlelo akho onke, nezizwe ezininziezininzi ezinawe.
12 ukuba uthimbe, uhlasele amaxhoba, usibuyisele isandlaisandla sakho kumanxuwa amiweyo, nakubantu abahlanganisiweyo ezintlangeni, bezuze imfuyoimfuyo nempahla, abahleli esazulwini somhlaba.
13 OoShebha noDedan, nabarhwebi baseTarshishe, neengonyama ezintsha zabo zonke, baya kuthi kuwe, Uze kuthimba na, ukuba lihlasele amaxhoba na ibandlaibandla lakho olibizele ndawonye? ukuba limke negolide nesilivere, lithabathe imfuyoimfuyo nempahla, lithimbe kakhulukakhulu na?
15 Uya kuphuma endaweni yakho, ezingontsini zasentla, wena nezizwe ezininziezininzi ezinawe, bekhwele emahasheni bonke bephela, ibandlaibandla elikhulu, impi eninzi;
16 unyuke ubafikele bantu bam amaSirayeli njengelifu, ukuba ulisibekele ilizweilizwe. Ekupheleni kwemihla kuya kubakho oko, ndikuse, ulifikele ilizweilizwe lam, ukuze iintlangaiintlanga zindazi, ekuzingcwaliseni kwam kuwe emehlweni azo, Gogi.
17 Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Nguwe na lowa, ndandithetha yena ngeemini zamandulo ngomlomo wabakhonzi bam, abaprofetiabaprofeti bakwaSirayeli, ababeprofeta iminyaka kwezo mini ngelithi, ndokuzisa phezu kwabo?
18 Kuya kuthi ngaloo mini, ngemini yokuwufikela kukaGogi umhlaba wakwaSirayeli, itsho iNkosi uYehova, bunyuke ubushushuubushushu bam emathatheni am.
20 Ziya kunyikima phambi kwam iintlanzi zolwandle, neentaka zezuluzezulu, namarhamncwa asendle, nezinambuzane zonke ezinambuzelayo emhlabeni, nabantu bonke abasebusweni bomhlaba, zigungxulwe iintabaiintaba, iwe imixawuka, zonke iindongaiindonga ziwe emhlabeni.
22 Ndiya kumgweba ngendyikitya yokufa nangegazi; nangesiphango esikhukulayo, nangamatye esichotho, umliloumlilo nesulfure ndiwunise phezu kwakhe, naphezu kwamahlelo akhe, naphezu kwezizwe ezininziezininzi ezinaye.
23 Ndiya kuzikhulisa, ndizingcwalise, ndizazise ngokwam emehlweni eentlanga ezininziezininzi; zazi ukuba ndinguYehova.
IEksodus 14:4, 18
2 Kumkani 19:28
IiNdumiso 11:6, 83:4
UIsaya 8:9, 25:3, 29:6, 37:29, 66:16
NguYeremiya 4:24, 49:31
UHezekile 20:41, 27:10, 12, 13, 14, 15, 28:22, 25, 29:4, 32:30, 34:25, 27, 36:5, 6, 15, 23, 24, 39:1
UDaniel 10:14, 11:40
UMika 4:1, 11
UZekariya 8, 14:12, 13
IsiTyhilelo 8:7, 11:13, 16:21, 20:8, 9